ချောကလက်နို့မှုန့် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -bubbleteapowderb2b.com
. ၏ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သည် ချောကလက်နို့မှုန့်, စက်ရုံတည်ရှိသည် Taiwan။ လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ဖောက်သည်များအားစျေးနှုန်းချိုသာသောအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ထုံးစံအမိန့်များနှင့်ပုံမှန်အမိန့်နှစ် ဦး စလုံးရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအမြင့်ဆုံးစံနှုန်းများကိုထောက်ပံ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအရည်အချင်းပြည့်မီသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏အခြေခံအချက်အလက်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောအတွေ့အကြုံရှိပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသောပညာရှင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ သင်ပိုမိုသိလိုလျှင်အခမဲ့ခံစားရပါ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်ချောကလက်နို့မှုန့်သည်အလွန်အရသာရှိသောသောက်စရာဖြစ်သည်,က’s အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောဆွဲဆောင်နှင့်နို့ရည်သည်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးသောပွဲဖြစ်သည်.ချောကလက်နို့မှုန့်သည်ချောကလက်အမှုန့်နှင့်ရောနှောခြင်းကိုမဖြစ်စေသည်-သင့်လျော်သောအဘို့ကိုအတွက် creamer,ထို့အပြင် Malt အရသာကဆက်ပြောသည်.ချောကလက်နို့မှုန့်ကိုလည်းဖျော်ရည်ပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်.Oreo ကွတ်ကီးအချို့ (သို့) crispy eggrolls၊,ကလေးတွေအတွက်အလွန်အိပ်မက်မက်ဖွယ်အချိုပွဲတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်.
Chocolate Bubble Tea သည်လန်းဆန်းစေသည့်ချောကလက်အချိုရည်ဖြစ်ပြီးရေခဲဖြင့်အကောင်းဆုံးရောနှောသို့မဟုတ်စားသုံးနိုင်သည်.ချောကလက်နို့မှုန့် vanilla ရေခဲမုန့်နှင့်အတူရောနှောသောအခါ,ကမယုံနိုင်လောက်အောင်ချောကလက်လှုပ်စေသည်.ချောကလက်နို့မှုန့်သည်အခြားပေးသွင်းသူများအတွက်ကျန်းမာသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်’အမှုန့်သောက်ရောနှောခြင်း,သကြားအများအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏.သံနှင့်ထုပ်ထားသောအရသာရှိသောချောကလက်နို့ကိုခံစားပါ,ကယ်လစီယမ်,ပရိုတိန်း,ပိုတက်စီယမ်,ဆိုဒီယမ်နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်.အမှုန့်ချောကလက်နို့အရသာရှိတဲ့သောက်စရာဖြစ်ပါတယ်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 http://www.bubbleteapowderb2b.com/my/chocolate-milk-powder.html
ချောကလက်နို့မှုန့် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ချောကလက်နို့မှုန့် ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ -ကျော် 23,9889 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ bubbleteapowderb2b.com
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ကော်ဖီကိုသင်ကြိုက်သည့်ကော်ဖီမိတ်ဖက် Creamer Powder အဖြစ်သို့ပြောင်းပါ.Lactose ပါသောဂန္တဝင်အရသာနှင့်ကြွယ်ဝပြီးချောမွေ့သည်-အခမဲ့,အဆီ-အခမဲ့,ကိုလက်စထရော-အခမဲ့,နှင့် gluten-အခမဲ့.ကော်ဖီမိတ်ဖက်မဟုတ်သော-နို့ထွက်ကော်ဖီ creamer,သင်သည်သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောသောက်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်. တစ် ဦး က Creamer အမှုန့်,အများအားဖြင့်ခေါ်လေ့ရှိသည့်လက်ဖက်ခြောက်ဖြူဖြူသို့မဟုတ်ကော်ဖီ whitener ဆိုသည်မှာနို့သို့မဟုတ်မုန့်ကိုကော်ဖီတွင်ထည့်သွင်းရန်အတွက်ရည်မှန်းထားသောအရည်သို့မဟုတ် granular ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။,လက်ဖက်ရည်,ပူပြင်းတဲ့ချောကလက်သို့မဟုတ်အခြားအဖျော်ယမကာ.၄ င်းတို့တွင် Lactose မပါဝင်သောကြောင့်အများအားဖြင့် Non ဟုခေါ်သည်-နို့ထွက်ပစ္စည်းများ,များစွာသော casein ဆံ့ပေမယ့်,နို့-ပရိုတိန်း. ခြောက်သွေ့သော granular ထုတ်ကုန်များကိုရေခဲသေတ္တာမလိုပါ။ ရေခဲသေတ္တာမရှိသည့်နေရာများတွင် အသုံးပြု၍ သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်.Liquid Creamer Powder ကိုဖွင့်ပြီးနောက်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်အအေးခံ။ အေးခဲအောင်လုပ်သင့်သည်.တချို့မဟုတ်-ခရင်မ်တွင်ချိုချဉ်များနှင့်အရသာများပါ ၀ င်သည်,ထိုကဲ့သို့သော vanilla အဖြစ်,သစ်သီးခွံသို့မဟုတ်အိုင်းရစ်မုန့်.သည်အခြားလုပ်ငန်းများ၌အစားအစာထုတ်ကုန်နှင့်ဝသကဲ့သို့,အနိမ့်ကယ်လိုရီနှင့်အနိမ့်အဆီဗားရှင်းမဟုတ်သောများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်-နို့ထွက် creamer.
Boba Popping မှ Milk Milk Powder သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ် ၁၈ လုံးကဲ့သို့သောသွင်ပြင်လက္ခဏာများပါဝင်သည်,ကယ်လစီယမ်,သွပ်,မန်းဂနိစ်,သံ,ဗီတာမင်စီ,စသည်တို့.Almond Milk Powder သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်အမြင့်ဆုံးပါဝင်သောသဘာဝအချိုရည်ဖြစ်သည်.Almond Milk Powder သည်သန့်ရှင်း။ လတ်ဆတ်သောဗာဒံသီးမှထုတ်ယူထားသောအဆင့်မြင့်လေဟာနယ်အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းပညာဖြင့်နို့ရည်ဖြင့်သန့်စင်သည်.POPPING BOBA CO.,LTD.ဗာဒံနို့မှုန့်ကိုအားပေးအားမြှောက်,၎င်းနှင့်ပြုလုပ်ထားသောအချိုရည်များသည်နို့ချိုချိုချောချောမွေ့သောအချဉ်များဖြစ်သည်,သောအလွန်သင့်လျော်သည်.ဒီသောက်စရာကောင်းကောင်းစားတာကောင်းတယ်.ဆောင်းရာသီရောက်လာသောအခါ,က’သင်နှင့်အတူပူပြင်းတဲ့ဗာဒံသောက်စရာအမြဲတမ်းအဆင်ပြေပါသည်. မူလနေရာ:ထိုင်ဝမ် လက်တင်အမည်:Armeniaca vulgaris Lam အသုံးပြုထားသောအပိုင်း:မျိုးစေ့ အသွင်အပြင်:အဖြူရောင်.ချောင်အမှုန့်,အဖုမရှိ,အဘယ်သူမျှမမြင်နိုင်အညစ်အကြေး အနံ့:သဘာဝလတ်ဆတ်သောဗာဒံနို့အရသာနှင့်အတူ ဗာဒံနို့မှုန့်အသုံးပြုခြင်း:အာဟာရရှိသောအစားအစာများတွင်အသုံးပြုသည်,မွေးကင်းစကလေးအစားအစာ,မာန,နံ့သာမျိုး,မီးဖုတ်ထားသောအစားအစာများ,သရေစာကသင်၏လှုပ်ခါမှုအတွက်အရသာကောင်းသည့်အစင်းများဖြစ်သည်,ကဗျာ,သစ်သီးလက်ဖက်ရည်,နှင့်သင်တန်း၏,နို့လက်ဖက်ရည်အချိုရည်!အအေးသောက်ရာတွင်အသုံးပြုသည်,အစိုင်အခဲအဖျော်ယမကာ,နို့ထွက်ပစ္စည်းများ. Almond Milk Powder ၏အကျိုးကျေးဇူးများ:Almond Milk Powder သည်နွားကဲ့သို့အာဟာရမပြည့်စုံသော်လည်း၊’နွားနို့,ကြွယ်ဝပြည့်စုံထုတ်ကုန်နီးကပ်လာ.သို့သော်,Almond Milk Powder သည်သဘာဝအားဖြင့်ဗီတာမင်များနှင့်ဓာတ်သတ္တုများစွာကြွယ်ဝစွာပါဝင်သည်,အထူးသဖြင့်ဗီတာမင်အီး.သူတို့ကမကြာခဏထည့်သွင်းဗီတာမင် D ကိုဆံ့,ကယ်လစီယမ်,နှင့်ပရိုတိန်း,သူတို့ကိုပုံမှန်အာဟာရပါ ၀ င်သောနို့များနှင့်ပိုမိုတူအောင်ပြုလုပ်ခြင်း.ပျားရည်ကို 50 ဖြစ်ကြပေမယ့်%အဆီနှင့်ကယ်လိုရီမြင့်မား,စီးပွားဖြစ် Almond Milk Powder သည်ကယ်လိုရီနည်းသောအဖျော်ယမကာတစ်ခုဖြစ်သည်.ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်မဖြစ်စေဘဲ၎င်းကိုများများစားစားသောက်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်.၎င်းသည် ၄ င်း၏ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအချို့သောအာဟာရများပေါများသည်. ဗာဒံနို့မှုန့်ပါဝင်ပစ္စည်းများ:Almond Milk Powder ထုတ်လုပ်သူများသည်အဆီပါဝင်သောအဆီနို့နှင့်ဆင်တူစေရန်၎င်းကိုရေနှင့်ရောစေသည်,၁ ပတ်ပတ်လည်ရှိမယ်%အဆီ.Almond Milk Powder ခွက်တစ်ခွက်တွင် ၃၉ ကယ်လိုရီသာရှိသည်,နို့မှုန့်နို့တစ်ခွက်တွင်ကယ်လိုရီ၏ထက်ဝက်ခန့်ရှိသည်.နို့ထွက်ပစ္စည်းများသည်အချမ်းသာဆုံးသောကယ်လ်စီယမ်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်.မတူတာကတော့,ဗာဒံသီးသည်ဤအာဟာရဓာတ်၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်.Almond Milk Powder ကိုနို့စစ်စစ်နှင့်ပိုမိုဆင်တူစေရန်,ထုတ်လုပ်သူများက၎င်းကိုကယ်လစီယမ်နှင့်ပိုမိုကြွယ်ဝစေသည်.ဥပမာအားဖြင့်,စီးပွားဖြစ် Almond Milk Powder ခွက်တွင် ၃၇ လုံးပါဝင်သည်%သို့မဟုတ်သင်၏နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်ထက်ပိုသော,အမျိုးအစားနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်မူတည်.ရလဒ်အနေဖြင့်,ကြွယ်ဝပြည့်စုံသောဗာဒံနို့သည်လှူဒါန်းသူများအတွက်အကောင်းဆုံးကယ်လစီယမ်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်’t သည်နို့ထွက်ပစ္စည်းများကိုစားသုံးသည်,ထိုကဲ့သို့သောသက်သတ်လွတ်နှင့်နို့မှမတည့်သို့မဟုတ်မတည့်သောသူတို့အား.အရိုးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်ကယ်လ်ဆီယမ်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်.ဒီအတွက်ကြောင့်,လုံလောက်သောကယ်လ်ဆီယမ်ပမာဏသည်အရိုးပွရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေသည်,အားနည်းသောအရိုးနှင့်အရိုးကျိုးနှင့်ဆက်စပ်သောအခွအေနေ.
Papaya Powder မှဆန့်ကျင်သည်-အိုမင်းခြင်းဂုဏ်သတ္တိများ,Papaya သည်အလွန်သေးငယ်သော micro အမျိုးအစားများစွာရှိသည်-ဗီတာမင်အပါအဝင်အာဟာရ,သတ္တုဓာတ်,အမျိုးမျိုးသော phytochemicals.ဤရွေ့ကားတ္ထုများခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသစ်များအစားထိုးဖြစ်စဉ်များမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်,DNA ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချ,နှင့်ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်း.ဤသက်ရောက်မှုအားလုံးသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအိုမင်းခြင်း၏ဖြစ်စဉ်ကိုနှေးကွေးစေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်.Papaya မှအရေပြားနှင့်ဆံပင်သည်အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်သည်,ဤတစ်ရှူးများကိုပုံမှန်အားဖြင့်လေကြောင့်ပျက်စီးစေနိုင်သည်,ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်,နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို. Papaya Powder သည်သဘာဝဓါတ်တိုးဆေးများဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်.အဆိုပါ flavonoids,polyphenols,carotenoids,နှင့် Papaya စက်ရုံ၏အခြား phytochemicals ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖွဲ့စည်းသောအခမဲ့အစွန်းရောက်ထိရောက်စွာဖမ်းယူခြင်းနှင့်ကြားနိုင်.အလွန်အကျွံလွတ်လပ်သောအစွန်းရောက်သောပမာဏသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိစိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကိုမြင့်တက်စေပြီးရောင်ရမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်.အခမဲ့အစွန်းရောက်များသည်လည်း DNA ပျက်စီးစေနိုင်သည်,ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည့်အရာပင်ဖြစ်သည်.ဤကဲ့သို့သောအရသာရှိသော Papaya Powder သည်ဤဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီလိမ့်မည်! Papaya အမှုန့်သည်သဘာဝကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအစားအစာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်,Papaya အသီးတွင် papain ပါဝင်သည်-လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှအိုမင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု,Papaya Powder တွင်ကြွယ်ဝသောသင်္ဘောသီးအင်ဇိုင်းပါဝင်သည်,သံပုရာအင်ဇိုင်း,carotene,ပရိုတိန်း,ဗီတာမင်စီ,B နှင့်ထိုကဲ့သို့သောကယ်လစီယမ်အဖြစ်သတ္တုဓာတ်,ဖော့စဖောရက်,စသည်တို့.,ရင်သားကင်ဆာတိုးမြှင့်ရှိသည်,endocrine ထိန်းညှိ,သွေးတိုးရောဂါ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ကုသမှု,glomerulonephritis,ဝမ်းချုပ်ခြင်း,အစာခြေခြင်းနှင့်အစာအိမ်ရောဂါကုသ,ထိုကဲ့သို့သောအလှအပအဖြစ်အကျိုးသက်ရောက်မှု,အရေပြားထိန်းသိမ်းမှု,အရောင်မြှင့်ပါ,လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်-အိုမင်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု. Papaya Powder အူလမ်းကြောင်း၏အကျိုးရှိသောဘက်တီးရီးယားကိုတိုးတက်စေသည်,Enteritis နှင့် laxness ဖျားနာမှုကိုလျော့နည်းစေရန်,အစာကျွေးခြင်းပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုတိုးမြှင့်.ဒါဟာအစတိုးတက်မှုနှုန်းတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်,အစာစားချင်စိတ်နှင့်အစာကျွေးစားသုံးမှုကိုတိုးတက်စေရန်,ထိရောက်စွာဇီဝသက်ရှိဖိနှိပ်ရန်,အစားပtheိဇီဝဆေးဝါးလုံးဝ,မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုပwithoutိဇီဝဆေးမရှိဘဲထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးတယ်. အကြံပြုအသုံးပြုမှု:Papaya Powder သည်အရသာအမှုန့်စီးရီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်.၎င်းသည်အသီးများစွာကြွယ်ဝသောအရသာရှိသည်,ရေပူသို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်ဖြင့်သွားနိုင်ပြီးကောင်းစွာသောက်နိုင်သည်.Papaya နို့ရည်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအချိုရည်တစ်ခုဖြစ်သည်,က’သင်္ဘောသီးနဲ့လုပ်ထားတယ်,နို့,သကြားနှင့်ရေခဲ Cube.၎င်းအမှုန့်ကိုနို့ရည်ထည့်။ ရောစပ်နိုင်သည်,သို့မဟုတ်ဖျော်ရည်အဖြစ်သို့ခံရဖို့,နှင့်အတူ’s အထူနှင့်တောက်ပနို့,မွန်းလွဲပိုင်းတွင်အနည်းငယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုအဖြစ် interweaves.
သစ်သီးအမှုန့်များသည်အကြိုဖြစ်သည်-မဟုတ်သောနှင့်အတူရောနှောအမှုန့်-ကအတွက် creamer,သောက်ဘို့ရေနှင့်ရောနိုင်ပါတယ်,သို့မဟုတ်၎င်း၏အရသာတိုးမြှင့်ဖို့အပိုနို့ထည့်ရန်.သူကသဲအရသာရှိပြီးဖျော်ရည်ကဲ့သို့ရေခဲကြည်လင်သည့်သေးငယ်သောအရသာလည်းရှိသည်,ဖရဲသီး၏ဖွဲ့စည်းပုံကဲ့သို့လေးလံသောပါးစပ်ဖြင့်ဖြစ်သည်.ဒါဟာ’လတ်ဆတ်သောဖရဲသီးနှင့်အတူအစေခံရန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှု. ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်ဖရဲသီးနှင့်ကုန်ကြမ်းများ၊ အဆင့်မြင့်မှုန်ရေမွှားခြောက်သွေ့သောနည်းပညာနှင့် Freeze Dried နည်းပညာတို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သစ်သီးဝလံအမှုန့်များကိုထုတ်လုပ်သည်။.ဖရဲသီးအရသာအလွန်သိုထားသည်.ကျွန်ုပ်တို့၏ဖရဲသီးအမှုန့်များတွင်ဗီတာမင်နှင့်အက်စစ်အမျိုးမျိုးပါဝင်သည်.ဒါဟာအမှုန့်ဖြစ်ပါတယ်,ကောင်းသောငွေဖြစ်လွယ်,ပိုကောင်းတဲ့အရသာ,ပျော်ဝင်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်.စင်ကြယ်သောအရသာ,မူရင်းအရသာနှင့် ၁၀၀%မည်သည့်ထို့အပြင်မပါဘဲပျော်ဝင်ရေ,တာရှည်နှင့်ခြယ်ပစ္စည်း. အသီးမှုန့်များ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ:က.ဖရဲသီးသည်အပူကိုဖယ်ရှားပြီးရေငတ်နိုင်သည်. ခ.ဖရဲသီးတွင်ပါဝင်သောသကြားနှင့်ဆားသည်ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်. ဂ.ဖရဲသီးစားပြီးနောက်ဆီးပမာဏသိသိသာသာတိုးလာလိမ့်မည်,သောသည်းခြေခြယ်ပစ္စည်းများ၏ content လျှော့ချနိုင်ပါတယ်,နှင့်မစင်ကိုချောမွေ့စေပြီးအသားဝါရောဂါကိုသက်သာစေနိုင်သည်. : D.ဖရဲသီးတွင်သွေးပေါင်ချိန်ကျစေသည့်အရာများပါ ၀ င်သည်,သောသွေးဖိအားကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်. သစ်သီးအမှုန့်များအသုံးပြုခြင်း:က.သစ်သီးဖျော်ရည်တွင်ထည့်ရန်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်,ပေါင်မုန့်,ကိတ်မုန့်,ကွတ်ကီးများသည်သင်၏လှုပ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်,ကဗျာ,သစ်သီးလက်ဖက်ရည်,နို့လက်ဖက်ရည်အချိုရည်! ခ.အစားအစာများအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်,အရောင်တိုးတက်စေမသာ,အမွှေးအကြိုင်နှင့်အရသာ,ဒါပေမယ့်အစားအစာ၏အာဟာရတန်ဖိုးတိုးတက်စေ.
ဆီးနှင်းခဲကိုစားခြင်း,သို့မဟုတ်ရေခဲရိတ်,သင်၏လျှာ၌အရသာရှိသောနှင်းကျခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်.ကျွန်ုပ်တို့၏ Ice Powder ကို အသုံးပြု၍ နှင်းခဲရေခဲတုံးများကိုဂန္ထဝင်ဖြစ်စေသည်,creamy နှင့်ချောချောမွေ့မွေ့,fluffy အချိုပွဲ.ကျွန်ုပ်တို့၏ရေခဲမှုန်သည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်-မုတ်ဆိတ်ရိတ်ထားသောရေခဲများကိုအစာစားရန်၊. ရိတ်ရေခဲနှင့်ရေခဲမုန့်ကွဲပြားခြားနားသည်,Ice Powder သည်နူးညံ့သောဆီးနှင်းကဲ့သို့အရသာအသစ်ရှိသည်.ဒါဟာအံ့သြဖွယ်အရသာနှင့်အရသာအရသာပေါင်းစပ်ထားတဲ့နှင်းပွင့်ရေခဲတစ်ခုဖြစ်သည်.အချိုရည်အမျိုးအစားအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်,ပုလဲနို့လက်ဖက်ရည်,အေးခဲနေသောသောက်စရာများ,အချစ်ရယ်,အချိုပွဲ,နေ့လည်ခင်းလက်ဖက်ရည်နှင့်ဖန်တီးမှုအစားအစာ. သင့်အတွက်အကြံပြုသည်:ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Snow Ice Maker ကိုရယူပါ,သင့်ရဲ့ဆီးနှင်းခဲလိုအပ်မှုအားလုံးအတွက် Shaver နှင့် Snow Ice Cube ကွန်တိန်နာ! သိုလှောင်နည်း:ကျေးဇူးပြုပြီးအေးမြ။ ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်သိမ်းပါ.